अब मर्निङ र इभिनिङ वाकका लागि घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने ! – Kavrepati
Home / समाचार / अब मर्निङ र इभिनिङ वाकका लागि घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने !
अब मर्निङ र इभिनिङ वाकका लागि घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने !
admin3weeks ago	समाचार Leaveacomment 229 Views
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा एक साता नि’षेधाज्ञा थप भएको छ। उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को बैठकले थप क’डाईका साथ निषेधाज्ञा एक सातालाई थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार उपत्यकामा नि’षेधाज्ञा एक साता थप गर्ने निर्णय भएको हो। एक साता थप गरिएको नि’षेधाज्ञामा थप कडाई हुने पराजुलीको भनाइ छ। निषेधाज्ञामा सर्वसाधारणलाई मर्निङ र इभिनिङ वाकका लागि घरबाट नि’स्कनेलाईसमेत का’रबाही गरिने भएको छ।
त्यसैगरी खाद्य पसल र डि’पार्टमेन्ट स्टोरसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि उपत्यकाभित्र जेठ १३ गतेसम्मका लागि नि’षेधाज्ञा जारी भएको थियो। पछिल्लो थप भएको निषेधाज्ञामा बिहान ९ बजेसम्म मात्र तरकारी पसल खोल्न दिइने छ। अब वि’वाहमा सातजना मात्र सहभागी हुन पाइने छ।
यसअघि १० जना सहभागी हुने पाइने निर्देशन जारी भएको थियो। को’रोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको हो। त्यस्तै आज देशभर थप ८ हजार ६३६ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २२ हजार ९३६ पीसीआर र ६३० जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ८ हजार ६३६ जनामा पोजेटिभ देखिएको हो ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार ४०४ हजार जना संक्रमणमु’क्त भएका छन् भने १६९ संक्रमितको मृ’त्यु भएको छ । अहिले १ लाख १७ हजार २६१ जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन् । नेपालमा को’रोना संक्रमितको संख्या ५ लाख २८ हजार ८४८ पुगेको छ ।
जसमध्ये ४ लाख ४८ हजार ८८७ जना नि’को भएका छन् भने ६७ सय जनाको मृ’त्यु भएको छ । त्यस्तै उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा २६१३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । काठमाडौमा १८६३, भक्तपुरमा ३२३ र ललितपुरमा ४२७ गरि २६१३ जनामा को’रोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Next २ दिन भित्र खाद्यान्नको जोहो गर्न अनुरोध, अब १ हप्ता ठप्प पारिने